I-China Medicated Leaven Traditional Chinese Herbal Medicine Medicine Ukukhiqiza kanye nefektri | Bestop
Igama lesiShayina: shen qu
Igama lesiNgisi: imvubelo ebonisiwe
Igama lesiLatin: imvubelo efakwe umuthi
Sebenzisa Ingxenye: Kucutshungulwa ngokungeza ufulawa noma ukolweni bran ku-Polygonum hydropiper nezinye izidakamizwa
Umsebenzi oyinhloko: Ubende nesisu, ukugaya nokuqongelela
I-Divine Comedy, igama lomuthi waseChina. Kuvutshelwa ngokufaka ufulawa noma i-bran ku-Polygonum hydropiper, i-Artemisia annua, i-almond paste, ubhontshisi we-adzuki kanye ne-Xanthium sibiricum entsha. Ikhiqizwa ezweni lonke. Iyisikwele noma ingunxande, inobubanzi obungu-3cm nobukhulu obungu-1cm. Ukubukeka kwayo kukhakhaki, okusanhlamvu okuqinile, okuqinile, okuphahlazeka futhi okulula ukugqashuka, ingxenye yesiphambano engalingani, izinsalela ezimhlophe, nezinsundu ezingazange zichotshozwe futhi kubonakala izimbobo ezinkulu zokuvutshelwa. Imile futhi iyababa.
Ubende nesisu, ukugaya kanye nokuqongelela.
Kusetshenziselwe ukoma kokudla, ukugaya ukudla, isisu esiswini, ukungathandi ukudla, ukugabha nohudo.
1. Iphilisi likaZhizhu: Lingaqeda ubende futhi liqinise isisu, futhi abantu abakwazi ukuyeka ukudla isikhathi eside. I-Atractylode macrocephala koidz eyodwa noma amabili (ethosiwe enhlabathini ephuzi, isuswe emhlabathini), eyodwa noma amabili angakabi sawolintshi omunyu (othosiwe nge-bran, asuswe ku-bran). Ekugcineni, amaqabunga e-lotus aphekwa ngelayisi, futhi amabhola ayagcotshwa akhuliswe. Thatha amaphilisi angama-50 ngesobho esimhlophe. Ukuma kwe-Qi, engeza ikhasi le-orange okukodwa noma ezimbili; Uma kunomlilo, engeza i-coptis eyodwa noma ezimbili; Uma kukhona isikhwehlela, engeza i-pinellia ternata eyodwa noma amabili; Uma kunamakhaza, engeza ama-yuan amahlanu kajinja omisiwe neSan Qian; Uma unokudla, engeza i-Divine Comedy ne-Mai ngezinhlanu lilinye. ("Jie Gu Jia Zhen")
2. Uhudo olungazelelwe ezinyangeni zasehlobo: ukuqinisa ubende nokufudumala kwesisu, nokwelapha ukulimala okubangelwe ukudla. Iphilisi leQushu: Lihlukanise libe yimpuphu yokugcina ne-Divine Comedy (stir-fried) ne-Atractylodes lancea (efakwe emarayinini amalayisi ubusuku bonke, kubhakwe), bese uyinamathisela kupilisi elikhulu. Thatha amaphilisi angama-30 noma angama-50 njalo, uphuze irayisi. ("Heji Bureau")
3. Umoya wekhanda nobuhlungu bobuchopho: i-10 kg yomvini we-lark, itshe elilodwa lamanzi, amabhakede amathathu we-decoction, namabhakede amathathu elayisi elinomsoco wokupheka. Uma kubanda, govuza i-Divine Comedy ekupheleni kuka-92, uyifake emgodini, bese wenza iwayini njengokujwayelekile. Ngemuva kwezinsuku ezintathu noma ezinhlanu, ngemuva kokubona igwebu selikhathele, ngapheka ibhakede lelayisi elimuncu ngaliphonsa emakhazeni, ngilindele ukucaciseleka. Phuza isibani esincane njalo, bese ujuluka lapho usuthathe. ("Shenghuifang")
Ingakhiqizwa unyaka wonke.
Chop fresh Artemisia annua L., fresh Xanthium sibiricum L. kanye nePolygonum hydropiper L. entsha ngayinye eno-12 kg; Ukugaya ubhontshisi obomvu, ukuqeda ngenethiwekhi yezemfundo yezokwelapha, ukuxebula nokugaya ama-alimondi, u-6 kg ngamunye, kuxubeka kahle, kufaka i-100 kg kakolweni we-bran kanye nofulawa omhlophe ongu-60 kg, kufaka amanzi afanele, ukuxova izigaxa, ukugoba, ukumboza ngotshani noma amasaka , ukubila, nokukhipha lapho i-hyphae ephuzi ikhula ngaphandle.
Langaphambilini Isitolo esidayisa yonke impahla Of Traditional Chinese Medicine Maca
Olandelayo: Umdabu Wendabuko WamaShayina Womuthi Wokuloba
Imithi Yesintu YamaShayina Yamasiko eSichuan Pepper
I-Chinese Herbal Medicine Platycodon Grandiflorum ...
I-Chinese Herbal Medicine Fructus Aurantii Esitokweni
Yesiko Chinese Herbal Medicine Isitolo esidayisa yonke impahla V ...
Chinese Herbal Medicine Isitolo esidayisa yonke impahla Alpinia Offic ...